Nhau - Biodegradable TPU Chigadzirwa Kuunganidzwa
Kutenda rutsigiro rwemafekitori ane saiti yekugadzira pamusoro pe 64,000 mativi emamirimita uye vanopfuura 2500 vane ruzivo vashandi pamwe neazvino otomatiki electroplating chirimwa uye yakapfava enamel kara yekupa michina, isu tinodarika vakwikwidzi vedu mukushanda kwakanyanya, nyanzvi, kutendeseka uye kugona kwazvo chigadzirwa mhando, kunyanya huwandu hwakawanda hunodiwa munguva pfupi kana yakaoma magadzirirwo aida vashandi vane ruzivo. Yakazvitsaurira kune yakasimba yemhando yekudzora uye inofungisisa vatengi, vedu vane ruzivo vashandi vevashandi vanogara varipo kuti vakurukure zvaunoda uye nekuona zvizere vatengi kugutsikana.
Unogona kucherechedza kuti kuri kuramba kuchipisa uye kuchipisa muzhizha, kuchitonhora nekutonhora munguva yechando. Kuchengetedzwa kwenharaunda kuri kuve kunofanirwa. Pamwe chete nevanhu kuchikumbiro chekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza chepamusoro & chakakwirira, nekudaro, izvo zvinhu zvinogona kuve zvinogadziriswa ndezve maitiro. Kunze kweizvilanyards yakasununguka, biodegradable PLA mashanga, mapepa ekunwa mashanga, gorosi mashanga emasikati mabhokisi, matanda coaster & keychainsnezvimwewo, Pretty Shiny Gifts ndiye chaiye mupi wekupa iyo inogadziriswa biodegradable TPU chigadzirwa kune vatengi vedu. Kupa yedu yakaganhurirwa kuyedza kune zvakatipoteredza kuchengetedzwa, uye pamwe chete kune nyika iri nani.
TPU zvinhu chinhu zvakatipoteredza zvine hushamwari izvo zvinogona kudzikisirwa. Iyo inochinjika, inogara yakasimba uye isina tsvina. Izvi zvinogadziriswa zvigadzirwa zvinogona kushandiswa muzvigadzirwa zvedu zvakasiyana senge zvinyorwa zvekusona,magineti efiriji, makiyi makiyi, mafoni masesi, screen wiper, runhare mazango, mikwende taggs, makadhi ekuchengetedza uye nezvimwewo Zvakawanda, iwe unogona kugadzirisa yako pachako logo yacho. Yakasiyana yekugadzira logo inogona kuitwa paTPU, senge silkscreen kudhinda, offset kudhinda, lenticular, glittering, glimmering, glitter liquid uye zvichingodaro. Yedu Eco-Inoshamwaridzika TPU zvigadzirwa zvakakwana zvekusimudzira, kushambadza, kuunganidza, chipo, kuendesa mabhenefiti ekuzivisa mhinduro etc. Musika wese unenge uchishamisa pane edu anogadziriswa zvigadzirwa & dhizaini yako inoyevedza.
Simba reTPU: biodegradable, inoshanduka-shanduka, yakasimba uye isingagadziriswe nevhu
Tsika marogo: kupenya, kupenya, kudhinda lenticular, kupenya kwemvura, kudhinda kwesilika, kudhinda neoffset nezvimwe.
MOQ: 500pcs / dhizaini
Kuva nehanya uye kuda kuburitsa TPU zvigadzirwa neyako wega tsika logo yezvako zvinotevera zviito? Ndokumbirawo mungopa zano chinhu kubva kuchitoro chedu chepamhepo kana yakawedzera katarogu, titumirei logo kana dhizaini pamwe chete nemodhita uye maitiro awasarudza. Isu tinokutumira iwe ruzivo rwemutengo uye chiratidzo chiratidzo kubva pane yako pachako dhizaini kuburikidza neemail. Ukangobvumidza humbowo uye kuendesa muripo, isu tichagadzirisa yako dhizaini uye ndokutumira kwauri.